तीतोपाटी डट कम- प्रदेश अस्थायी राजधानीको कुराको बिषयलाई लिएर पहिला त खासै केहि कुरा भएको थिएन तर अस्थायी राजधानी तोके पछि राजधानी नपाएकाले आन्दोलन गर्न सरु गरेका छन ! हिजो बाट सरु भएको आन्दोलन उग्र रुप लिएको छ ! बिहिबार दिउँसो दिपायलमा उग्र आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ !
दिपायल स्थित क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय अगाडी आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप हुदा १० राउण्ड हवाई फायर भएको छ ! झडपमा परि तिन आन्दोलनकारी गम्बिर घाईते भएका छन ! घाईते मध्ये एकजनाको अस्पताल मा लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी ले बताएको छ !
क्षेत्रिय प्रशासन कार्यलय अगाडी आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाएपछि झडप भएको हो !प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अश्रु ग्याससमेत प्रहार गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार बाध्य भएर १० राउण्ड हवाइ फायर गर्न परेको उनले बताएका छन !सरकारी मोटरसाइकल जलाईयो आन्दोलनकारीले सरकारी मोटरसाइकलमा आगजनि गरेको छ ! सरकारले गरेको निणयको बिरोधमा जारी आन्दोलनको क्रममा डोटीमा मोटरसाइकल जलाईएको थियो ! बा १ ब ७६३९ नम्बरको मोटरसाईकलमा आन्दोलनकारीले आगो लगाएरका हुन् !
सदरमुकाम सिलगढीस्थित जिल्ला वन कार्यालयमा रोकेर राखिएको उक्त मोटरसाइकल आन्दोलनकारीले सडकमा ल्याएर आगो लगाएका हुन्।र सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरे सम्म आन्दोलन जारी हुने उनिहरुको बयान छ ! देसको सबै ठाउँमा राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने हो भने के यो देस रहन्छ र भारतले देसको सिमा मिचेको बेला केहि नबोल्ने नेपाली आज प्रदेसको राजधानीको
बिषयलाई लिएर दाजु-भाई आपसमा लडेका छन !